လက်ရှိ ယူနိုက်တက် အသင်း အပေါ် ဟယ်ရီ ရက်ဒ်နပ်က ဘယ်လို ထင်မြင်နေပြီလဲ ?? - SPORTS MYANMAR
လက်ရှိ ယူနိုက်တက် အသင်း အပေါ် ဟယ်ရီ ရက်ဒ်နပ်က ဘယ်လို ထင်မြင်နေပြီလဲ ??
ပရီးမီးယား လိဂ် ပြိုင်ပွဲ တစ်လျောက် အတွေ့ အကြုံ ကောင်းတွေ များစွာ ပိုင်ဆိုင် ထားခဲ့ တဲ့ ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ တော့တင်ဟမ် ဟော့ စပါး အသင်း တို့ရဲ့ နည်းပြ ဟောင်း ဟယ်ရီ ရက်ဒ်နပ် က လက်ရှိ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ နည်းပြ ဖြစ်သူ အိုလီ ဂန်နား ဆိုးလ်ရှား က တစ်ကယ့် ကို ခက်ခဲ တဲ့ အလုပ် တစ်ခု ကို ပိုင်ဆိုင် နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
ဒါ့အပြင် လက်ရှိ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ကောင်းပါတယ် လို့ ပြောလို့ ရမယ့် နေရာ တစ်ခု ရဲ့ အနီး အနား မှာတောင် မရှိ ကြောင်း ၊ ဒါဟာ ပရီးမီးယား လိဂ် ပြိုင်ပွဲ တစ်လျောက် အဆိုးရွားဆုံး မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ အကောင်းဆုံး ပြန်လာ နိုင်ဖို့ အချိန် အများကြီး ပေး ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ရက်ဒ်နပ် က ပြောကြား သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ယူနိုက်တက် ဟာ နည်းပြ ဟောင်း ဆာ အဲလပ်စ် ဖာဂူဆန် ခေတ် တုန်းက အမှတ်ပေး ဖလား 13 ကြိမ် ထိ ဆွတ်ခူး ထားနိုင် ခဲ့ပြီး ဥရောပ ပြိုင်ပွဲ မှာလည်း ဆု ဖလား တွေကို အမြဲတမ်း လိုပဲ ခြိမ်းခြောက် နိုင်တဲ့ အင်အား အကြီးဆုံး အင်္ဂလိပ် ကလပ် အသင်း တစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ဖာဂူဆန် မရှိ တော့တဲ့ နောက်ပိုင်း မှာတော့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ရလဒ်တွေ ဆက်တိုက် ဆိုသလို ဆိုးရွား ခဲ့ သလို ပြီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုန်းက လည်း အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့်6နေရာ မှာသာ ရပ်တည် နိုင်ခဲ့ပြီး ယူရို ပါလိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာ ကစား နေခဲ့ ရ ပါတယ် ။
အခုတော့ ဖာဂူဆန် လက်ထက် တုန်းက ယူနိုက်တက် ကို ပြိုင်ဖက် အသင်း အဖြစ် ရင်ဆိုင် ဖူးတဲ့ ဟယ်ရီ ရက်ဒ်နက် က လက်ရှိ နည်းပြ ဆိုးလ်ရှား လက်အောက် မှာ ယူနိုက်တက် ဟာ အတော်လေး ကျဆင်း နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ၊ အသင်း ကို နေရာ မှန်ဆီ ခေါ်လာ နိုင်ရေး အတွက် ဆိုးလ်ရှား အနေ နဲ့ အထူး ကြိုးစား အားထုတ် ဖို့ လိုအပ် ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” ဒါဟာ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း အတွက် ခရီး အရှည်ကြီး တစ်ခုကို လျှောက်လှမ်း ရမယ့် အချိန် ပါပဲ ။ လက်ရှိ အသင်း က လုံလောက်စွာ ကောင်းမွန်တယ် ဆိုတာ ရဲ့ အနီး တစ်ဝိုက် မှာတောင် ရှိ မနေ ပါဘူး ။ ခင်ဗျား တို့ အိုလီ နဲ့ နည်းပြ တွေကို ဝေဖန် နိုင် ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ အသင်း မှာ ရှိ နေတဲ့ ကစားသမား အစု အဖွဲ့ က သူတို့ ကို အခု နေရာ ရောက်ရှိ စေသူ တွေ ပါပဲ ”
” ခင်ဗျား ဟာ ဝက်စ်ဟမ်း နဲ့ ပွဲစဉ် တုန်းက မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကို ကြည့်ပြီး ‘ တစ်ကယ့် သာမန် အသင်း တစ်သင်း ပဲကွာ ‘ လို့ တွေးတော နေပါ လိမ့်မယ် ။ သူတို့ ထက် ပိုပြီး ဝက်စ်ဟမ်း ကတောင် ပို ကောင်းမွန် တဲ့ အသင်း လို့ ထင်မှတ် ခံခဲ ရ ပါတယ် ။ ယူနိုက်တက် က အဲ့ဒီ လို အနေအထား ကို ရောက်ရှိ နေပါပြီ ။ သူတို့ အတွက် စိုးရိမ်မိ ပါတယ် ”
” လာမယ့် တစ်နှစ် ၊ နှစ်နှစ် အတွင်း သူတို့ တွေသာ ကစား သမား ကောင်း လေး ၊ ငါးယောက် လောက်ကို မခေါ်ဘူး ဆိုရင် ဒီဒဏ် ကို ပရိသတ် တွေက ဆက်လက် ခံစား ကြရ ဦးမှာပါ ။ သူတို့ အနေ အထား က အဲ့ဒီလို ဖြစ်နေ ခဲ့ ပါပြီ ။ သူတို့ တွေက လုံလောက်စွာ မကောင်းမွန် ကြတော့ ပါဘူး ”
” ဖာဂီ တုန်းက ဆိုရင် ပရီးမီးယား လိဂ် ပြိုင်ပွဲ မှာ တစ်ကြိမ် မှ ဆိုးရွား တဲ့ အသင်း ကို မပိုင်ဆိုင် ခဲ့ရ ပါဘူး ။ သူ ကိုင်တွယ် ခဲ့တဲ့ အသင်း တိုင်းက အံ့ချီးဖွယ် တွေချည်း ပါပဲ ။ ဒါ့ကြောင့် အခု အသင်း က သာမန် အသင်း တစ်ခု လို ဖြစ်နေ ရတာ ပါ ။ အခု တော့ မန်နေဂျာ က အရင် အမွေ အနှစ် တွေကို ပြန်လည် ပိုင်ဆိုင် နိုင်ဖို့ အထူး ကြိုးစား ရပါ တော့မယ် ”
” မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း မှာ ကြီးကျယ် ခမ်းနား တဲ့ ရိုးရာ တစ်ခု ရှိနေ ခဲ့ပြီး စပါယ်ရှယ် ဘောလုံး အသင်း တစ်သင်း အဖြစ် ရပ်တည် နိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။ သူတို့ တွေက ကမ္ဘ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး အသင်း တစ်သင်း ဖြစ်ခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ဒါ့ကြောင့် လူခေါ်တဲ့ အခါ ကစားသမား ကောင်းတွေ လာကြ မှာပါ ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ တွေဟာ ကစားသမား ခေါ်ယူ မှု ကောင်းကောင်း မလုပ် နိုင်ခဲ့ ကြ ပါဘူး ”
” သူတို့ လက်ရှိ ပိုင်ဆိုင် နေတဲ့ ကစားသမား အစု အဖွဲ နဲ့ ဆိုရင် ဆက်လက် ရုန်းကန် နေရ ဦးမှာ ပါပဲ ။ ကျွန်တော် ကတော့ ထိပ်သီး လေးသင်း အကြောင်း မတွေး ပါဘူး ။ ဒီ ပုံစံ အတိုင်း သာဆို သူတို့ ဆက်လက် ဂရုတစိုက် မကစား ကြဘူး ဆိုရင် သူတို့ တွေက ထိပ်သီ6းသင်း ပြင်ပ ကိုတောင် ရောက်ရှိ နိုင် ပါတယ် ”
” ဒီ ဘောလုံး ရာသီ မှာ လက်စတာ မဟုတ်ရင် ဝက်စ်ဟမ်း အသင်း က ထိပ်သီ6းသင်း စာရင်း ထဲကို ဝင်ရောက် လာနိုင် ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ အချိန် မှာ တစ်သင်းသင်း ကတော့ နေရာ ဖယ်ပေး ရပါ လိမ့်မယ် ” လို့ ဟယ်ရီ ရက်ဒ်နပ် က သုံးသပ် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
လကျရှိ ယူနိုကျတကျ အသငျး အပျေါ ဟယျရီ ရကျဒျနပျက ဘယျလို ထငျမွငျနပွေီလဲ ??
ပရီးမီးယား လိဂျ ပွိုငျပှဲ တဈလြောကျ အတှေ့ အကွုံ ကောငျးတှေ မြားစှာ ပိုငျဆိုငျ ထားခဲ့ တဲ့ ဝကျဈဟမျး နဲ့ တော့တငျဟမျ ဟော့ စပါး အသငျး တို့ရဲ့ နညျးပွ ဟောငျး ဟယျရီ ရကျဒျနပျ က လကျရှိ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ နညျးပွ ဖွဈသူ အိုလီ ဂနျနား ဆိုးလျရှား က တဈကယျ့ ကို ခကျခဲ တဲ့ အလုပျ တဈခု ကို ပိုငျဆိုငျ နပွေီ ဖွဈကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
ဒါ့အပွငျ လကျရှိ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ကောငျးပါတယျ လို့ ပွောလို့ ရမယျ့ နရော တဈခု ရဲ့ အနီး အနား မှာတောငျ မရှိ ကွောငျး ၊ ဒါဟာ ပရီးမီးယား လိဂျ ပွိုငျပှဲ တဈလြောကျ အဆိုးရှားဆုံး မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဖွဈကွောငျး ၊ အကောငျးဆုံး ပွနျလာ နိုငျဖို့ အခြိနျ အမြားကွီး ပေး ရမှာ ဖွဈကွောငျး ရကျဒျနပျ က ပွောကွား သှားခဲ့ ပါတယျ ။
ယူနိုကျတကျ ဟာ နညျးပွ ဟောငျး ဆာ အဲလပျဈ ဖာဂူဆနျ ခတျေ တုနျးက အမှတျပေး ဖလား 13 ကွိမျ ထိ ဆှတျခူး ထားနိုငျ ခဲ့ပွီး ဥရောပ ပွိုငျပှဲ မှာလညျး ဆု ဖလား တှကေို အမွဲတမျး လိုပဲ ခွိမျးခွောကျ နိုငျတဲ့ အငျအား အကွီးဆုံး အင်ျဂလိပျ ကလပျ အသငျး တဈခု ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ဖာဂူဆနျ မရှိ တော့တဲ့ နောကျပိုငျး မှာတော့ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ရလဒျတှေ ဆကျတိုကျ ဆိုသလို ဆိုးရှား ခဲ့ သလို ပွီးခဲ့တဲ့ ဘောလုံး ရာသီ တုနျးက လညျး အမှတျပေး ဇယား အဆငျ့6နရော မှာသာ ရပျတညျ နိုငျခဲ့ပွီး ယူရို ပါလိဂျ ပွိုငျပှဲ မှာ ကစား နခေဲ့ ရ ပါတယျ ။
အခုတော့ ဖာဂူဆနျ လကျထကျ တုနျးက ယူနိုကျတကျ ကို ပွိုငျဖကျ အသငျး အဖွဈ ရငျဆိုငျ ဖူးတဲ့ ဟယျရီ ရကျဒျနကျ က လကျရှိ နညျးပွ ဆိုးလျရှား လကျအောကျ မှာ ယူနိုကျတကျ ဟာ အတျောလေး ကဆြငျး နပွေီ ဖွဈကွောငျး ၊ အသငျး ကို နရော မှနျဆီ ချေါလာ နိုငျရေး အတှကျ ဆိုးလျရှား အနေ နဲ့ အထူး ကွိုးစား အားထုတျ ဖို့ လိုအပျ ကွောငျး ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” ဒါဟာ မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး အတှကျ ခရီး အရှညျကွီး တဈခုကို လြှောကျလှမျး ရမယျ့ အခြိနျ ပါပဲ ။ လကျရှိ အသငျး က လုံလောကျစှာ ကောငျးမှနျတယျ ဆိုတာ ရဲ့ အနီး တဈဝိုကျ မှာတောငျ ရှိ မနေ ပါဘူး ။ ခငျဗြား တို့ အိုလီ နဲ့ နညျးပွ တှကေို ဝဖေနျ နိုငျ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ အသငျး မှာ ရှိ နတေဲ့ ကစားသမား အစု အဖှဲ့ က သူတို့ ကို အခု နရော ရောကျရှိ စသေူ တှေ ပါပဲ ”
” ခငျဗြား ဟာ ဝကျဈဟမျး နဲ့ ပှဲစဉျ တုနျးက မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ကို ကွညျ့ပွီး ‘ တဈကယျ့ သာမနျ အသငျး တဈသငျး ပဲကှာ ‘ လို့ တှေးတော နပေါ လိမျ့မယျ ။ သူတို့ ထကျ ပိုပွီး ဝကျဈဟမျး ကတောငျ ပို ကောငျးမှနျ တဲ့ အသငျး လို့ ထငျမှတျ ခံခဲ ရ ပါတယျ ။ ယူနိုကျတကျ က အဲ့ဒီ လို အနအေထား ကို ရောကျရှိ နပေါပွီ ။ သူတို့ အတှကျ စိုးရိမျမိ ပါတယျ ”
” လာမယျ့ တဈနှဈ ၊ နှဈနှဈ အတှငျး သူတို့ တှသော ကစား သမား ကောငျး လေး ၊ ငါးယောကျ လောကျကို မချေါဘူး ဆိုရငျ ဒီဒဏျ ကို ပရိသတျ တှကေ ဆကျလကျ ခံစား ကွရ ဦးမှာပါ ။ သူတို့ အနေ အထား က အဲ့ဒီလို ဖွဈနေ ခဲ့ ပါပွီ ။ သူတို့ တှကေ လုံလောကျစှာ မကောငျးမှနျ ကွတော့ ပါဘူး ”
” ဖာဂီ တုနျးက ဆိုရငျ ပရီးမီးယား လိဂျ ပွိုငျပှဲ မှာ တဈကွိမျ မှ ဆိုးရှား တဲ့ အသငျး ကို မပိုငျဆိုငျ ခဲ့ရ ပါဘူး ။ သူ ကိုငျတှယျ ခဲ့တဲ့ အသငျး တိုငျးက အံ့ခြီးဖှယျ တှခေညျြး ပါပဲ ။ ဒါ့ကွောငျ့ အခု အသငျး က သာမနျ အသငျး တဈခု လို ဖွဈနေ ရတာ ပါ ။ အခု တော့ မနျနဂြော က အရငျ အမှေ အနှဈ တှကေို ပွနျလညျ ပိုငျဆိုငျ နိုငျဖို့ အထူး ကွိုးစား ရပါ တော့မယျ ”
” မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး မှာ ကွီးကယျြ ခမျးနား တဲ့ ရိုးရာ တဈခု ရှိနေ ခဲ့ပွီး စပါယျရှယျ ဘောလုံး အသငျး တဈသငျး အဖွဈ ရပျတညျ နိုငျခဲ့ ပါတယျ ။ သူတို့ တှကေ ကမ္ဘ္ဘာ့ အကောငျးဆုံး အသငျး တဈသငျး ဖွဈခဲ့ ရ ပါတယျ ။ ဒါ့ကွောငျ့ လူချေါတဲ့ အခါ ကစားသမား ကောငျးတှေ လာကွ မှာပါ ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ တှဟော ကစားသမား ချေါယူ မှု ကောငျးကောငျး မလုပျ နိုငျခဲ့ ကွ ပါဘူး ”
” သူတို့ လကျရှိ ပိုငျဆိုငျ နတေဲ့ ကစားသမား အစု အဖှဲ နဲ့ ဆိုရငျ ဆကျလကျ ရုနျးကနျ နရေ ဦးမှာ ပါပဲ ။ ကြှနျတျော ကတော့ ထိပျသီး လေးသငျး အကွောငျး မတှေး ပါဘူး ။ ဒီ ပုံစံ အတိုငျး သာဆို သူတို့ ဆကျလကျ ဂရုတစိုကျ မကစား ကွဘူး ဆိုရငျ သူတို့ တှကေ ထိပျသီ6းသငျး ပွငျပ ကိုတောငျ ရောကျရှိ နိုငျ ပါတယျ ”
” ဒီ ဘောလုံး ရာသီ မှာ လကျစတာ မဟုတျရငျ ဝကျဈဟမျး အသငျး က ထိပျသီ6းသငျး စာရငျး ထဲကို ဝငျရောကျ လာနိုငျ ပါတယျ ။ အဲ့ဒီ အခြိနျ မှာ တဈသငျးသငျး ကတော့ နရော ဖယျပေး ရပါ လိမျ့မယျ ” လို့ ဟယျရီ ရကျဒျနပျ က သုံးသပျ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။